2 makore mwedzi 1 apfuura #365 by Mathew3120
Ndaida kubvunza mubvunzo pamusoro installers, kana imi vakomana kunatsurudza installers dzenyu nokuda addons.Will tsaru installers vachiri kukwanisa nokudhanilodha addons kana kuita ndinofanira nokudhanilodha neAdhoni zvakare pamwe installer itsva.
2 makore mwedzi 1 apfuura #366 by rikoooo
Unofanira kukopa neAdhoni zvakare, installers itsva wagadzirira kuti azvino P3D uye FSX Steam, kutangira installer shanduro 10.
2 makore mwedzi 1 apfuura #374 by rufgar
Mhoro. Ini achangobva kutorwa pilatus yori-9 kubva kuchitoro wako default kuenda forodha aihuitira fsx uye kwete fsx-chiutsi. Ini vaikopa uye pasted kuti fsx-hwemvura uye akunoita zvakanaka kunze gauges. Pane chigamba ichi kana ndinoiwana kukopa zvakare? Ndatenda.
2 makore mwedzi 1 apfuura #376 by Gh0stRider203
rufgar akanyora: Hi. Ini achangobva kutorwa pilatus yori-9 kubva kuchitoro wako default kuenda forodha aihuitira fsx uye kwete fsx-chiutsi. Ini vaikopa uye pasted kuti fsx-hwemvura uye akunoita zvakanaka kunze gauges. Pane chigamba ichi kana ndinoiwana kukopa zvakare? Ndatenda.
saka gauges havana kuisa, ari zvauri kutaura? Just Wanna nechokwadi tiri papeji chete ndisati kutanga kureva zvinhu
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: rufgar
2 makore mwedzi 1 apfuura #377 by rufgar
Hongu cockpits varipo ipapo asi gauges hadzishandi.
2 makore mwedzi 1 apfuura #378 by Gh0stRider203
zvakanaka, apo ndiri kumhanya Gold Edition, kubva chii ndinonzwisisa apo haimuoni kugadza yakasiyana Directory pane Steam, Understanding WANGU ndechokuti Ukangosvina kuenda FSX Directory muna chiutsi, zvose ndiro (NDAPOTA ndiruramisei kana ini ' M zvakaipa).
Unofanira chete kukwanisa kuisa sezvizvi dzose, ipapo chete kufambisa zvose zvakakodzera folders. Ndiri guessing ndizvo zvamaita?
Uchava kukanganwira Me elnaz Handina kumbobvira kushandiswa FSX Steam Edition elnaz MWARI anoziva KANA ndikazombova kundoitora, zviri gonna kuva kurwadziwa hwoumambo ahem unoziva zvose ... ahhh nhumbi ndine lmao ini mean..My FSX forodha ndiyo chete s erm 67.2 .... elnaz
2 makore mwedzi 1 apfuura #379 by rufgar
Haikwanise dzishandise zvakananga fsx-chiutsi. Anofanira vakakopa fsx. Izvi zvinoreva kuzvitsaurira gauges config anofanira akasikwa kuti vashande. Hapana gauges wangu fsx achashanda munguva chiutsi.
2 makore mwedzi 1 apfuura #380 by rufgar
2 makore mwedzi 1 apfuura #381 by Gh0stRider203
Hapafaniri (kanenge mupfungwa) kuva gauges forodha ari hwemvura shanduro ....
Lemme kuwana makabata vamwe nadzo kumadhindindi, pamwe vanogona kubatsira zviri nani kupfuura Me
2 makore mwedzi 1 apfuura #382 by rufgar
Thanks NAYE vakaonga zvikuru
Time chokusika peji: 0.310 mumasekonzi